lynda, Auteur à déliremadagascar · Page 2 de 33
Sazian’ny lalàna ny fikasihan-tanana mpianatra. Tsapa tato ato fa mbola mitohy ny fanaovana herisetra toy ny fikasihan-tanana mpianatra eny anivon’ny sekoly tsy miankina. Continuer la lecture →
Mariky ny faha-10 taona. Nampahafantarina androany 10 janoary 2020 teny Antaninarenina ny fiarahamiasa eo amin’ny orinasa Telma amin’ny alalan’ny Mvola sy ny banky BMOI Madagascar. Manomboka izao dia mihatsara ny kalitaon’ny filan-draharaha omen’ny roa tonta ny mpanjifa noho ny vokatra “bank to wallet” na “wallet to bank”. Continuer la lecture →
Socio-eco	 8 janvier 2020 lynda
SECES ANTANANARIVO : Mbola santionany ny fanidiana vavahady
Hanao fanambarana ny sendika rahariva. Talohan’ny fetin’ny fara-taona dia nanome fe-potoana ny fitondram-panjakana, hatramin’ny 15 janoary mba hanome valiny mahafapo sy maharitra momba ny fitakiany ny Seces (sendikan’ny mpampianatra-mpikaroka sy mpikaroka-mpampianatra) Sampana Antananarivo. Continuer la lecture →
politique	 3 janvier 2020 lynda
KANDIDA RANDRIAMASINORO TAHIRY NY RINA: Hanohy ny fitakiana ny marina eny amin’ny Magro Behoririka
Tombony ho an’ny fitondrana ny fivoahan’ny marina. Ho tohiny ny fitoriana nataon’ny kandida ho ben’ny tanàna an’Antananarivo Renivohitra, Randriamasinoro Tahiry Ny Rina teny amin’ny fitsarana misahana ny ady atao amin’ny fanjakana dia ho eny amin’ny Magro Behoririka indray ny tenany sy ireo mpiara-dia aminy miaraka amin’ireo vahoaka mandala ny fahamarinana no hanohy ny fitakiana ny marina. Continuer la lecture →
MIALY RATREMA: Ireo akanjo mariazy vita amin’ny lamba landy
Mifameno ny asa famoronana ataon’i Mialy Ratrema sy i Gaona. Andro iray toa zato ny mariazy ka ny soa sy ny tsara indrindra no tokony aseho. Izany indrindra no namoronan’i Mialy Ratrema akanjo mariazy vita amin’ny lamba landy. Continuer la lecture →